खुशी हुन चहानुहुन्छ? जीवनमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी पाँच काम – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > खुशी हुन चहानुहुन्छ? जीवनमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी पाँच काम
admin November 11, 2020 November 11, 2020 जीवनशैली	0
हाम्रो दैनिक जीवनमा कुनै न कुनै घटना घटित भइरहेको हुन्छ । हामीले जानेर या नजानेर कुनै न कुनै काम गरिरहेका हुन्छौं । कतिले आफ्ना काम समयमा नै फत्ते गर्छन् भने कतिले काम लथालिङ्ग छोडिदिने गर्छन् । जिवनमा कतिपय काम गर्दा जानेर वा नजानेर गल्ती हुन्छ र जसको कालान्तरसम्म असर रहने गर्छ । जीवनमा गरिएका केही कामले भने मान्छेलाई अप्ठेरो अवस्थामा लैजाने गर्छन् । यस्ता अप्ठेरोबारे जोगिने गरौंः
ऋण: यदि तपाईंले ऋण लिनुभएको छ भने या कसैलाई ऋण दिनुभएको छ भने यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ । तपाईंले कसैसँग ऋण लिनुभएको छ भने त्यसलाई सकभर तिरिहाल्नुस् । किनकि ऋणको व्याज बढ्दै जान्छ । र, यसले समस्यामा पार्छ ।
शत्रुता: तपाईंले सकभर कसैसँग पनि शत्रुता राख्ने काम नगर्नुस् । सकेसम्म सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने प्रयास गर्नुस् । शत्रुतालाई मित्रतामा बदल्नुस् । यदि कोही त्यस्तै शत्रु भइहाले पनि यसलाई महत्व नदिनुस् तर बरु यसलाई उचित मौकामा मित्रतामा बदल्नुस् । सकभर जीवनमा कसैसँग पनि शत्रुता नराख्नुस् ।
आगो: संसारमा आगो यस्तो शक्तिशाली चीज हो कि, यसले ठूलो विनाश निम्त्याउन सक्छ । कहिलेकाहीँ आगोको सानो झिल्कोले पनि तपाईंको घर, टोल या समाज नै सखाप बनाउन सकछ । आगोलाई सकभर काम सक्नासाथ निभाइहाल्नुस् ।
रोग: हाम्रो शरीरमा विभिन्न कारणले रोग लाग्ने गर्छ । समयमा नै रोगबारे सचेत हुन सकिएन भने यसले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । रोगलाई सामान्य भनेर हेलचेक्रयाइँ गर्दा यसले जीवन नै भुमरीमा पार्न सक्छ ।
शारीरिक सम्पर्क: वैवाहिक जीवनमा शारीरिक सम्बन्धको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ । यदि तपाईंले कसैलाई माया गर्नुहुन्छ भने उनलाई यौनसम्पर्कका बेला सन्तुष्ट पार्नुस् । तपाईंको पार्टनर खुशी हुन सकेन भने यसले जीवनमा फाटो ल्याउँछ ।
भारतका चर्चित स्ट्याण्डअप कमेडियन तथा अभिनेता राजिव निगमको ९ वर्षका छोरा देवराजको निधन भएको छ । यसको जानकारी राजिवले आफ्नो सोसल मिडियामा दिएका छन् ।
यो पनिः पिताको जन्मदिनमा छोडे संसार
राजिव निगमले छोराको निधनको जानकारी दिँदै देवराजसँगको फोटो फेसबुकमा सेयर गरेका छन् । यससँगै उनले क्याप्सनमा लेखेका छन्, ‘जन्मदिनमा यो कस्तो सरप्राइज पाएँ । मेरो छोरा देवराज मलाई छोडेर गए । जन्मदिनको केक नकाटिकनै । पागल, यस्तो उपहार कसैले दिन्छ ?’
राजिव निगमका छोरा देवराज सन् २०१८ मा असाध्यै बिरामी भएका थिए । त्यतिबेला देखि उनी धेरैजसो बिरामी भइरहन्थे । सन् २०१८ मा उनी केही दिन आइसीयूमा बसेका थिए । त्यतिबेला पनि उनले सोसल मिडियामा मानिसहरुलाई छोराको स्वास्थ्यलाभका लागि प्रार्थना गरिदिन सबैलाई आग्रह गरेका थिए । लगभग तीन महिना अघि (अगस्ट ७) राजिवका पिताको पनि निधन भएको थियो ।
श्रीमति परपुरुषसँग सल्केको थाहा पाउन सकिने यस्तो छ सजिलो उपाय ! जानी राखौं
नायिका श्वेता खड्का पनि किन पुगिन सविता माताकोमा! – तस्बिरहरू सहित